Accueil > Gazetin'ny nosy > Fenoarivo : Nofatorana dia nodarohan’ny Jiolahy izy efa-mianaka
Ny alin’ny asabotsy faha 19 septambra 2020, nanomboka tamin’ny 9 ora alina dia notafihin’ny jiolahy ny tanàna iray eny Benasandratra Fenoarivo. Tokony tamin’ny 9 ora alina raha mbola avy nanaraka fandahara tao amin’ny fahitalavitra iray ny fianakaviana ity. Tampoka teo dia jiolahy mitana basy kalaky no nanondro vavabasy ity tompon’ny tanàna. Tsy afaka nampiasa ny basy tao an-tranony intsony ity rangahy ity fa tonga dia nifona sy nandohalika ka nanao hoe “ aza vonoina izahay sy ny fianakaviako fa alaivo izay tianareo rehetra halaina”. Daroka izay tsy izy no setran’izany nahazo ity tompon-trano ka nandoa rà avy hatrany. Nofatoran’ireo dahalo ity rangahy ity. Fantatra koa fa valo lahy ireo mpanafika. Nalainy daholo ny entana tao an-trano ary nofatorany koa ilay mpanampy vavy azy ireo. Ilay renim-pianakaviana izay marary tratran’ny aretin’ny tosi-drà dia mba tsy nokasihin’ireo jiolahy ireo. Tao aorian’izay dia noteteziny ihany koa ny trano hafa izay nisy ny zanak’ity raimpianakaviana ity. Ao anaty tamboho iray no misy azy ireo ka samy manana ny trano ipetrahany. Mbola manana basy ihany koa ity zanany ity ary tsy afaka nanao na inona na inona. Nalainy koa ny zavatra tiany halaina rehetra tao amin’ity trano ity rehefa avy nampijaliany sy nodarofany ihany koa. Fongana tanteraka ny entana rehetra misy vidiny hatramin’ny finday. Avy eo dia norohiziny sy nodarofany koa ity zanany ity ka tsy afaka nihetsika.
Dia nataony toa izany koa ny tao amin’ny zanak’ity raimpianakaviana ity iray hafa sy ny vady aman-janany. Trano telo no voatafika tamin’izany ka fongana tanteraka. Ny tena olana lehibe ankehitriny dia ny fahazoan’ireo jiolahy ireo ny basy poleta efatra tao amin’ity tanàna ity. Rehefa lasa tokony tamin’ny 11 ora alina ka nahavita izay tiany rehetra ireo dahalo ireo dia napoakany ny basy teny amin’iny faritry ny “pilone”.
Tonga teny ihany halina ny zandary eo Fenoarivo raha vao nandre ny fanafihana saingy tsy trtatra intsony ireo jiolahy. Tamin’ny farany indrindra vao nanafika tao amin’ilay mpiambina ny tanàna ireo jiolahy ka azony tao koa ny basy poletan’ilay mpiambina. Nofatorany ihany koa.Nanao izay daninn’ny kibony tamin’ny fandravaravana ny fananan’ity fianakaviana iray manontolo ity ireo jiolahy marobe ireo tao anatin’ny ora roa mahery.
Ny tena nahagaga ny olona koa dia tsy afa nihetsika ilay alikabe antsoina hoe “bull-dog” izay anisan’ny mpiambina ity tanàna ity.
Lasan’ny jiolahy avokoa ny vola rehetra tao amin’izy efa-mianaka ireto. Ny an’ny rainy dia ny vola fisotroan-dronono azy mivady izay mbola noraisina andro vitsy lasa izay. Tsy mandry ny tany saika manondidina an’Antananarivo amin’izao fotoana izao. andian-jiolahy hatrany no tonga manao fanafihana amin’ny olona izay hitany fa misy zavatra halaina. Rahany nanafika teny Benasandratra Fenoarivo ity dia mbola tovolahy kely tanora ireo jiolahy hoy ireto voatafika.